ब्राजिलका राष्ट्रपतिले कोरोना निको पार्ने भन्दै औषधि खाएको ( भिडियो ) भाइरल ! – Life Nepali
ब्राजिलका राष्ट्रपतिले कोरोना निको पार्ने भन्दै औषधि खाएको ( भिडियो ) भाइरल !
काठमाडौं । बिभिन्न विवादमा पर्दै आएका ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोले कोरोनालाई निको पार्ने भन्दै एक औषधि खाएको भिडियो भाइरल भएको छ । कोरोनालाई सामान्य फ्लु भन्दै बे’वास्ता गर्दै आएका बोल्सोनारो आफैं कोरोना संक्रमित भएका छन् । आफू कोरोना पोजेटिभ भएको जानकारी दिन आयोजित प्रेस ब्रिफिङको क्रममा मास्क निकालेर बोलेको भिडियो पनि भाइरल भएको थियो ।
अहिले उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा एक भिडियो पोष्ट गरेका छन्, जसमा उनले कोरोना निको पार्ने औषधि भन्दै सेतो रङ्गको गोली पानीले निलेको देखिन्छ । ब्राजिलका राष्ट्रपति बोल्सोनारोले भिडियोमा भनेका छन्, ‘म हाइड्रोक्सि क्लोरोक्वीन औषधिबाट आफ्नो उपचार गर्दैछु ।’ जबकी कोरोनाको औषधि पत्ता लागेको छैन र कुनै पनि औषधि कोरोना संक्रमित विरामीको उपचारमा प्रयोग गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमति दिएको छैन । हाइड्रोक्सि- क्लोरोक्वीन मलेरियाका बिरामीलाई दिइन्छ ।
सुरुमा यो औषधि कोरोना भाइरस संक्रमितलाई पनि उपयुक्त हुने ठानिएको थियो तर पछि त्यसको पुष्टि भएन । तर राष्ट्रपति बोल्सोनारोले भिडियोमा विज्ञानले पुष्टि नगरे पनि आफूले यो औषधि खान थालेपछि सुधार भएको महसुस गरेको बताएका छन् । भिडियोमा कुनै डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मी देखिँदैनन् । यो भिडियो अहिले सामाजिक सन्जालहरुमा भाइरल भइरहेको छ । गत मार्च महिनामा बोल्सोनारोले हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन कोरोनाको औषधि भनेको भिडियो ट्वीटर र फेसबुकले डिलिट गरिदिएका थिए । हेर्नुहोस भाइरल भिडियो :
Previous Breaking News: भारतले बनायो अर्को रेकर्ड सबैभन्दा बढी संक्रमीत हुने तेस्रो देश
Next नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण ब’न्द गर्ने निर्णय स्वागत यो’ग्य !
57 seconds ago Life Nepali